यू–१६ ‘नेक्सस् कप क्रिकेट’ हुँदै - HAMRO YATRA
यू–१६ ‘नेक्सस् कप क्रिकेट’ हुँदै
भक्तपुर–नेक्सस् क्रिकेट एकेडेमी (एन.सी.ए.) को आयोजनामा “नेक्सस् कप २०७३” हुने भएको छ । यू–१६ इन्टर एकेडेमी टि–२० राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता आगामी चैत १५गते देखि बैशाख ५ गते सम्म काठमाण्डौमा हुन लागेको एन.सी.ए का अध्यक्ष भरत कुमार शाहीले जानकारी दिए ।
शोबिज स्पोर्टस प्रा.लि.को सहकार्यमा हुन लागेको प्रतियोगिता लिग तथा नकआउटको आधारमा सञ्चालन हुनेछ । सो प्रतियोगिता सर्टिफाइड अप्पायहरुले आईसिसिद्वारा निर्धारित निमयअनुसार खेलहरु संचालन गरिनेछन् । हाल देशभर निजी एवं सामुदायिकस्तरबाट सञ्चालित क्रिकेट एकेडेमी तथा क्लवहरुमध्येबाट न्यूनतम ३२ टिमका ४ सय ४८ खेलाडीहरु प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन् । प्रतियोगितामा चार पुल बनाई हरेक पुलमा ८ टिमहरु हुने र हरेक टिमले लिग चरणमा ७÷७ खेलहरु खेल्नेछन् । प्रतियोगितामा सहभागि सम्पूर्ण टिमहरुले प्रति टिम तीस हजार सहभागी शुल्क तिर्नुपर्नेछ ।
अध्यक्ष शाहीका अनुसार सहभागीलाई आयोजकको तर्फबाट आवासको मात्र ब्यवस्था गरिएको छ । करिब ५८ लाख लागतमा हुने सो प्रतियोगितामा पहिलो हुनेलाई १ लाख ५० हजार नगद सहित बिजेता ट्रफी, दोस्रो हुनेलाई १ लाख रुपैयाँ नगद सहित रनर अफ टर्फी, म्यान अफ द सिरिज लाई रु. २० हजार र मेमेन्टो, इर्मजीङ प्लेअरलाई १५ हजार सहित मेमेन्टो, वेस्ट बलरलाई १० हजार सहित मेमेन्टो, वेस्ट ब्याटसमेनलाई १० हजार सहित मेमेन्टो र म्यान अफ द म्याचलाई मेमेन्टो प्रदान गरिनेछ ।
प्रतियोगिताका लागि भरत कुमार शाहीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय मूल आयोजक समिति बनाइएको छ । त्यस्तै विभिन्न ६ वटा उपसमिति जस्तै प्राविधिक उपसमिति, प्रचार प्रसार उपसमिति, अर्थ ब्यवस्थापन उपसमिति, आवास ब्यवस्थापन उपसमिति, प्रतियोगिता संचालन तथा ब्यवस्थापन उपसमिति र खेलमैदान ब्यबस्थापन उपसमिति गठन गरिएको छ । जसमा संयोजकहरु क्रमशः रबिन्द्र गुप्ता,अरुण देव जोशी,यूवराज गिरी,शामसन जंग थापा,अरुण कुमार अर्याल र अजय पाँडे रहेका छन् ।